तपाई २४ घण्टामा कति घण्टा सुत्नुहुन्छ ? सुतेको समयले बताउँछ तपाईको आयु कति ? – List Khabar
Home / जीवनशैली / तपाई २४ घण्टामा कति घण्टा सुत्नुहुन्छ ? सुतेको समयले बताउँछ तपाईको आयु कति ?
तपाई २४ घण्टामा कति घण्टा सुत्नुहुन्छ ? सुतेको समयले बताउँछ तपाईको आयु कति ?
admin February 12, 2022 जीवनशैली Leaveacomment 58 Views
काठमाडौं । के तपाई दैनिक आठ घण्टाभन्दा कम सुत्ने मानिसमध्येमा पर्नुहुन्छ ? यस्ता धेरैमा मानसिक तनाव एवम् निराशा (डिप्रेसन)को समस्या देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
अनियमित सुताई भएकाहरुमा नकारात्मक सोँचको विकास हुने गरेको र उनीहरुको जीवनमा नै नकारात्मक असर असर समेत पर्ने गरेको पाइएको समाचारमा जनाइएको छ । एजेन्सी
1.दैनिक बिहान मनतातो पानी पिउँदा शरिरको फोहोर बाहिर निस्कने गर्दछ जसका कारण मृगौला सम्बन्धि रोग लाग्नबाट जोगाउँछ ।
2.दैनिक बिहान मनतातो पानी पिउँदा शरिरको अतिरिक्त बोसो पग्लने गर्दछ जसका कारण तपाईंको तौल नियन्त्रणमा रहन्छ ।
3.मनतातो पानीले खानालाई राम्रोसँग पचाउन सहयोग गर्दछ । यसले पाचन प्रणालीलाई बलियो राख्छ ।
4.नियमित रुपमा खाली पेटमा मनतातो पानी पिउनुहुन्छ भने पसिनामार्फत छालाको फोहोर निस्कने गर्दछ । यसले छालाको संक्रमणलाई पनि जोगाउँछ ।
5.दैनिक मनतातो पानी पिउँदा घाँटीमा जम्मा भएको खकार निस्कने गर्दछ । यसले श्वास सम्बन्धि रोग र दम हुनबाट जोगाउँछ
Previous माईत जान लाग्दा श्रीमतीले श्रीमानलाइ लेखेको एक मार्मीक चिठ्ठी …पढ्नुहोस
Next २ दिन भित्रमा सोचेको काम बन्नेछ, पूरा पढेर ॐ लेखि सेयर गरौं